အဲဒါကို "communicate" သို့မဟုတ်လူပေါင်းကောင်းသောလူတစ်ဦးမှကိုဆိုလိုတယ်ဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အဲဒါကို "communicate" သို့မဟုတ်လူပေါင်းကောင်းသောလူတစ်ဦးမှကိုဆိုလိုတယ်ဘာလဲ?
စီးပွားရေးအဆက်အသွယ်တည်ထောင်ရန်လူများ၏စွမ်းရည်, ဆက်သွယ်ရေး, ဆက်ဆံရေးမျိုး (လတ်။ Communicatio အဆက်အသွယ်ဆက်သွယ်ရေးထံမှ) လူပေါင်းကောင်းသော။
စည်းကမ်းအတိုင်း, လျှောက်ထားသူ၏ပုံကိုတည်ငြိမ်မှုကိုယ်ရေးရာဇဝင်အားဖြင့်စစ်တယ်။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအရာရှိများသင်သည်တာဝန်တစ်ခုအနေအထားများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းချင်အထူးသဖြင့်လျှင်, သဒ္ဒါနှင့် stylist အမှားများကိုအာရုံစိုက်။ စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းမှုတစ်ကြိမ်မှာမြင်နိုင်ပါ, အယ်လီနာ Starovoit ပြောပါတယ်နဲ့သူတို့ရဲ့အမှားတွေကနေရွေးချယ်ခွဲ ထား. ကဲ့သို့သောခက်ခဲသည်မဟုတ်။ နောက်ထပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ရပ်စဲအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့လျှောက်ထားသူရဲ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တင်းတင်းပြောတတ်တဲ့အခါသမယအတွက်ရှိနေခြင်း။
ဒုတိယညွှန်ကိန်းသည်မည်မျှစနစ်ကျ။ ရှင်းလင်းပြီးပြည့်စုံသည်ကိုဖော်ပြသည် အလုပ်ရှာသူ သူ၏တာ ၀ န်ကိုပြန်လည်ပြုစုခဲ့သည်။ သို့သော်အသေးစိတ်ကိုမနက်ရှိုင်းပါနှင့်၊ ဤအချက်သည်သင်၏မျက်နှာသာပေးမှုမကျရောက်နိုင်သောကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုညွှန်းကိန်းများကိုမှန်ကန်စွာသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၏အရေးကြီးဆုံးအချက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ သင်၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုရှင်းလင်းစွာနှင့်အတိုချုပ်ဖော်ပြခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းမှာသူမ၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ဦးတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးကာလအတွင်းသူ၏မိန့်ခွန်း၏ psycholinguistic ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအင်တာဗျူးခြင်းဖြင့်အဓိကအား check လုပ်ထားနှင့်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်များန်ဆောင်မှုပုဂ္ဂိုလ်များလူပေါင်းကောင်းသောဒီလိုမျိုးအကဲဖြတ်ရန်သောအတော်ကြာစံရှိပါတယ်:
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုဆိုလိုသည် - လူပေါင်းကောင်းသော။
— способность, склонность к коммуникации, к установлению контактов и связей; коммуникабельный человек — легко устанавливающий контакты, приятный в общении.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်များ, ဆက်သွယ်ရေး, ကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ရန်လူများ၏စွမ်းရည်။